Igwefoto igwefoto ohuru nke B & H na-eme ihe ngosi Exrodinary | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Igwefoto igwefoto ohuru nke B & H na-eme ihe osise
Onyinyo di nfe nwere ike ikwu otutu ihe, ma iweghara ihe omuma a bu mkparita uka nke nkwuputa ihe omuma nke iguputa ma n’iru ndi na - ege ihe. Ọkachamara ọ bụla na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-aghọta na onyonyo n’azụ ọdịnaya vidiyo ha nwere ike ịgwa ndị na-ege ntị na-achọ ozi ọtụtụ ozi. Na na B & H Igwefoto Igwe Ọkụ zuru oke, ndị ọrụ mgbasa ozi agaghị enwe nsogbu iweghara echiche nke ndị na-ege ha ntị.
B & H (Blimie & Herman) bụ onye America na-ere ahịa na ngwa ahịa vidiyo. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1973, ọ na-eduzi azụmahịa site na ịre ahịa ntanetị n'ịntanetị, azụmaahịa na azụmaahịa azụmahịa, yana otu ụlọ ahịa ya na Manhattan, New York. B & H na - arụ ọrụ dị ka onye na - eweta ngwaahịa akụrụngwa mepụtara nke nwere ngwaahịa na ngwaahịa na - enweghị atụ. Site na ijikọta na nkewa ha na Studio na B2B, onye na-ere ahịa na-enwe ike inye ndị ahịa ohere ịnweta teknụzụ dị elu na nka maka ahịa ọdịnaya niile. Na ọdịnaya na-aga nke ọma dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-erite uru karịa na mwepụta nke usoro igwefoto zuru oke, Sony PXW-FX9 XDCAM 6K.
B & H Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Sistemụ igwefoto zuru oke
Ihe ogugu zuru oke Sony FX9 na-enye ndị ọrụ ikike ijide ihe osise pụrụ iche / sayensị ụcha & ihe nleba anya na ike ndekọ yana ụdị 2.0 nke FX9 firmware ma ọ bụ firmware VENICE. Ọ baghị uru ma onye ọrụ gbasaa akwụkwọ akụkọ, ihe omume, TV n'ezie, agụmakwụkwọ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emepụta. Na mgbakwunye na Sony si PXW-FX9 XDCAM 6K Sistemụ igwefoto zuru oke siri ike ma nwee mgbanwe igwefoto lens 4 na-agbanwe agbanwe, ọ na-enwekwa ihe ngosipụta zuru ezu, ihe 6K Exmor R CMOS sensọ. Ihe mmetụta a na-enye onye ọrụ ohere ijide ihe osise 4K na cinematic miri, yana PXW-FX9's E-Mount na igwe site na igwe anaghị agba nchara ma na-enyere onye ahịa aka iji E-Mount lenses.
The PXW-FX9 njirimara ntinye na ntinye putara 12G-SDI na HDMI na-apụta maka 4K, ntinye 3G-SDI maka HD, na genlock na codec mgbe ị na-eji ntọala multicamera. Ngwa ngwa Auto Hycus AF autofocus na-enye ohere maka itinye uche ziri ezi na ọ na-enyekwa ohere nyocha ihu na akpaghị aka ịchọpụta ụdị mmadụ na ntanetị 561 na-achọpụta. Na PXW-FX9 nwere ike nweta nkwalite onyonyo dị elu site na iji gyroscope dị n'ime ya maka gbaa wee dị mma karịa ọ ga - adị ka ọ bụrụ na ejirila gimbal mee ihe. Igwe egwu nwere ọwa 4 nwere igwe na-enye onye ọrụ ohere iji igwe okwu mpụga ma dekọ ụda ambient ya na ntanetị mics ahụ n'otu oge.
Sony's PXW-FX9 O nwere ihe di iche-nnochi anya ihe 15 ma na-ede 10-bit 4: 2: 2 rue XQD media kaadị nke na-akwado imekotaotu oge na relay, yana otutu usoro ndekọ ndekọ ndabere nke na-eji faịlụ proxy. Usoro igwefoto nwere ike idekọ UHD (3840 x 2160) na HD (1920 x 1080) n'ime ọnụọgụ nhọrọ ahọpụtara site na 1 fps ruo 60 fps na XAVC-I, XAVC-Long, na MPEG HD usoro. Na iwelite firmware n'ọdịnihu, igwefoto agaghị enwe nsogbu ịdekọ HD ihe ruru 180 fps na mmepụta 16-bit raw 4K / 2K footage ruo 120 fps.
Na mgbakwunye na igwefoto di omimi zuru oke, agba ya na njiri mara ya nwere uzo ISO nke 800/4000, nke a na - enyere ya aka karia mgbe o na - anagide onodu ndi di ala ma obu iji oghere di nro. Ntu ya nke 7 na-agbanwe agbanwe igwe elekere eletriki igwe nwere ike ịrụ ọrụ na akpaaka ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka, na-eji nwayọọ na-agbazi site na nha 1/4 ruo 1/128. Na PXW-FX9 Igwefoto nwekwara nchekwa agba S-Cinetone nke ndabara, nke na-enye otu olu dị nro, nke doro anya dịka Sonyigwefoto VENICE.
The PXW-FX9 gụnyere akpụkpọ ụkwụ akpọrọ Multi-Interface (MI) wee bata na batrị BP-U35, chaja batrị nke BC-U1A, nkwụnye AC na eriri abụọ, okpu ahu, onye na-ahụ anya, ihe na-ahụ anya, njikwa anya, na eriri USB. Igwefoto a dakọtara na mpaghara ndọtị XDCA-FX9 dị iche iche dịnụ, nke ahụ na-enyekwa ya nkwado ENG ubu uhere, njikọ mmekọrịta, yana oghere maka onye na-anata igwe na-anabatabeghị ikuku.
Maka ozi ọzọ banyere Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Sistemụ igwefoto zuru oke, nleta www.bhphotovideo.com/c/product/1506002-REG/sony_pxw_fx9v_pxw_fx9_xdcam_6k_full_frame.html/overview.
Ihe B&H Pụrụ Ime Maka Ndị Mgbasa Ozi
Na ntinye nke PXW-FX9, ndị mgbasa ozi nwere ọtụtụ uru ha ga-erite na ngwaahịa n’ime B & H ahịrị ahia. Ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a gụnyere Igwe okwu Podcast na-agbanwe ike Rode PodMic, nke bu njiri agbasa ozi, igwe okwu dikwa egwu ekwuputara maka Podcast. O nwere ụda mara mma, nke nwere nguzozi, ya na ihe nhichapụta nke ime ya na igbago ujo nke ime ka iwelata ujo.
Enwere ike ịchọta ohere ndị ọzọ maka mgbasa ozi site na iji ụlọ ọrụ ahụ HP 15.6 ″ ZBook 15 G6 Mobile Workstation, nke bụ ọgbọ ọzọ na-esote HP ZBook 15 G6 & HP ZBook 17 G6. Ndị a bụ laptops zuru oke maka ndị na-ese ihe, ndị na-ede vidiyo, na ndị okike VR chọrọ ịrụ ọrụ desktọọpụ, ha na-enyekwa ndị ọrụ nnwere onwe ka ha rụọ ọrụ na gburugburu ọ bụla.
B & H enweela ihe nketa dịtere aka nke nọrọla ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri ise. N’oge ahụ, o gosipụtala onwe ya dị ka onye na-ere ahịa ngwa ahịa vidiyo na-eduga, ọ na-agakwa n’ihu n’inye ya ndị na-egwu egwu, ndị na-ese ihe na ụdị ndị ọzọ dị iche iche nwere okike vidiyo kachasị mma nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịgbasawanye site na . Ngwaahịa dịka ihe PXW-FX9 ma ọ bụ na Igwe okwu Podcast na-agbanwe ike Rode PodMic bụ naanị ngwụcha nke ice.
Maka ozi ndị ọzọ na B&H, gaa www.bhphotovideo.com/.
B & H Nkewa B2B Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndi oru mgbasa ozi Sistem Igwefoto zuru-oke FX9 firmware Graham Chapman Prmoted toEditor ngwa oru eji emeputa ihe Ọdịnaya Nhazi Podcasting SoftAtHome, MStar, CES2017 Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Ụgha & Akụrụ Ultra HD Forum VINICE firmware ọdịnaya vidiyo Ngosi Injinia virtual eziokwu 2020-05-15
Previous: Ngwurugwu na-enuba Global: Ewelite ebe ndị ọzọ na-eme mkpọda nke Lower Delay, Higher Scale, na TCO dị ala
Osote: Ada 2020 Adjunct ngalaba, Television na Mmepụta Vidiyo